Weerarrii fi Loli Liyyuun Poolisii cimee itti fufee akka jiru maddeen . – Kichuu
HomeAfaan OromooTVWeerarrii fi Loli Liyyuun Poolisii cimee itti fufee akka jiru maddeen .
ONN: Oduu Fuulbana 10/2017: Weerarrii fi Loli Liyyuun Poolisii cimee itti fufee akka jiru maddeen gabaasaniiru.
Weerarrii fi Loli Liyyuun Poolisii Soomaalee ilmaan Oromoo irratti bante guyyaa hardhaas cimee itti fufee akka jiru maddeen gabaasaniiru.
ONN: Oduu Amma Nu-dhaqqabeen Baha Oromiyaa Aanaa Jaarsoo Bakka Daarimu ja’amtutti Lola Cimaa Ummata Oromo fi Liyyu Polis Juddtti Deemaa jiruun Ummanni Oromo W/Liyyu Polis Gaara Daarimuu irraa yaasanii Diida Waaleetiin Qaarsanii kan jiran tahuu isaanii Maddeen Naannicha irra ONNf Gabaasanii jiru.
Haaluma kanaan weeraraa fi Lola gartuun weerartuu Poolisii addaa Soomaalee goodina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Lolaa Araddaa Jiddoo Garrii fi Ibroo Muusaa irratti banteen ilmaan Oromoo 4 kan wareegaman yommuu ta’u, lama akka madaawan maddeen gabaasaniiru.
Ilmaan Oromoo afran guyyaa hardhaa wareegaman Milishoota araddaa Jiddoo Garrii yommuu ta’an isaannis:
4,Abdii Maahamud kan jedhaman yommuu ta’u, araddaa kanarraa Poolisiin Oromiyaa tokkoo fi namni biraa tokko kan biroo yommuu madaa’an araddaa Ibroo Muussaa irraa
ammoo namoonni: Elemoo Mahammud Ibroo Miseensa Poolisii Oromiyaa ta’ee fi namni biraa tokko kan madaa’an yommuu ta’u, gama liyyuu Poolisii irraa 7 akka ajjeefaman maddeen gabaasaniiru. Kun osoo kanaan jiruu, Poolisooni Liyyuu Haylii soomaalee araraddaalee jahan miidhagaa Lolaa humna waraanaa meeshaa hanga funyaaniitti hidhateen marsitee waan jirtuuf, waajjira poolisii aanaa miidhagaa, uummata aanaa miidhagaa hundi dirmannaa akka godhan waamichi darbeera.
Gama biraatiin Mootummaan Wayyaanee TPLFn durfamtu Uummata Oromoo aanaa Cinaaqsan irraa meeshaa hiiksisuuf, raayyaa waraanaa Konkolaataa 14 Magaalaa Cinaaqsan keeysa kan qubachiifte yommuu ta’u, lola guyyaa hardhaa aanaa Cinaaqsan Araddoota Daarimuu fi Qaaligaa keeysatti taassifameen qeerroon araddoota kanaa miseensoota Poolisii liyyuu Haylii sadii meeshaa isaanii waliin booji’uu isaanii fi gama Oromoo irraa ilmi Oromoo Abdii Hajii jedhamu akka madaa’e maddeen gabaasaniiru. Bifuma wallfakkaatuun weerara liyyuu poolisiin aanama kana araddaa Hulluuqoo Daarimuu keessatti geggeessiteen ilmi Oromoo Mohaammad Arab jedhamu kan wareegame yommuu ta’u, Oromoon Aadam_Hiilee jedhamu akka madaa’uu fi gama Liyyuu Poolisii irraa namni lama jjeefamuun namni sadii ammoo kan madaa’an ta’uun gabaafameera.
Lola kana irratti Loltoonni Oromoo
2. kilaash 3
3. chiichii 1
4. Faal 1 kan booji’an yommuu ta’u, lolli akkuma itti fufetti akaa jiru gabaafameera.